Kenichi Suzumura – Stars – MMANIME
The Garden of Sinners – Remix: Gate of Seventh Heaven Before the release of the final 7th movie,aremix work "Kara no Kyoukai Remix-Gate of seventh heaven-" comes out in theaters on March 14, 2009. This remix collection extracts the key themes and scenes from first six movies. The hour long movie is organized in chronological order, beginning from the 2nd movie, followed by the 4th, 3rd, 1st, 5th ...
IMDB: 8.1/104votes
The Garden of Sinners: Future Gospel – Extra Chorus Timeline: 1998. Side stories. Adaptation of the manga by Takashi Takeuchi. Premiered and sold with Future Gospel. ဒီကားက Side story ပါပဲဟိုတစ္ပါတ္ကတင္ေပးလိုက္တဲ့ကားရဲ႕ Side storyေလးပါပဲ။ ဒီဇာတ္လမ္းထဲမွာေျပာခ်င္တာကေတာ့ Chapter 1မွာတုန္းကတိုက္ေပၚကခုန္ခ်ျပီးသတ္ေသခဲ့တဲ့ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕သူငယ္ခ်င္းအေၾကာင္းရယ္ ေၾကာင္တစ္ေကာင္ကလဲခံစားခ်က္ရွိပါတယ္ဆိုတာကို New Year ညမွာတူတူစကားေျပာျဖစ္ၾကတဲ့ Shiki နဲ႔ khokuto တို႔2ေယာက္အေၾကာင္းပါ။ ကဲေနာက္မွာအနွစ္ခ်ုပ္တစ္ကားပဲက်န္ပါေတာ့တယ္။ အဲ့တာၾကီးျပီးရင္ေတာ့ Peace site ေပ့ကတင္ဆက္ေပးတဲ့ Garden of sinner projectၾကီးျပီးပါျပီ။ေနာက္ကားတင္နိုင္ဖို႔တြက္အားေပးတဲ့သူေတြေရာရွိၾကေသးရဲ႕လား =,= Fate
The Garden of Sinners: Future Gospel Mirai Fukuin (lit. The Future's Gospel) isaside story of Kara no Kyoukai novel series. It is divided into two parts, Möbius ring, and Möbius Link. ပထမဆုံးပြောချင်တာက GOS ကိုမေ့နေကြပြီလား =,= နောက်တစ်ခုကာဒီကားစာဖိုင်က ရှားနေတာရယ်ရှိတဲ့စာဖိုင်က စာကြောင်းပေါင်း သောင်ချီနေတာကြောင့်ကြာနေတာဖြစ်ပြီးတော့ သောင်းချီနေတဲ့စာကြောင်းတွေကို ဖြတ်ရင်းနဲ့ ၆မိနစ်စာ ဘာသာပြန်စာကြောင်းတွေပါမလာခဲ့ပါဘူး။ Sorry ပါ အဲ့တာအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အတွက်။ ဒါပေမဲ့ ပါမလာတာက ဇာတ်လမ်းအပေါ်ထိခိုက်မှုမရှိတဲ့အတွက် ကံကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပါပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ တောင်းပန်ပါတယ် အဲ့ဒီတွက်။ နောက်မှာနှစ်ကားပဲကျန်တော့ပါတယ်။ ဒီ Movie အရက်အဆက်အပိုင်းတိုလေးရယ် နောက် ၁ကနေ ၆ထိ လိုတာတွေထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ Timeline စီပေးထားတဲ့အနှစ်ချုပ်တစ်ကားရယ်ပဲကျန်ပါတော့တယ်။ ကဲကဲစာရှည်ပြီးတော့ Review ကိုသွားရအောင် ဒီကားအကြောင်းကထွေထွေထူးထူး ပြောစရာသိပ်မရှိပါဘူး။ ...
The Garden of Sinners – Chapter 3: Remaining Sense of Pain July 1998 - Afteragroup of delinquents is found dead in their hangout place with all their limbs twisted and torn off, Aozaki Touko receivesarequest to find the murderer and asks Shiki for help. The main suspect is Asagami Fujino;agirl who was the boys' plaything until recently, who Shiki believes to be "one of her ...
IMDB: 7.5/10 54655 votes
The Garden of Sinners – Chapter 2: A Study in Murder (Part 1) August 1995: Mikiya first meets Shiki inawhite kimono duringasnowing day. Later on, at the high school freshmen ceremony, Mikiya sees Shiki in the crowd and chases after her, introducing himself to her. But Shiki hidesabig secret: A wave of bizarre murders occur around many loose ends, and no suspects. there are still many questions: ...
IMDB: 7.0/10 54515 votes
The Garden of Sinners – Chapter 1: Overlooking View When an odd string of suicides begins to occur atalocal high rise building, most of the townsfolk treat it as an unfortunate series of events. One girl, however, senses something more sinister at work - especially whenaclose friend of hers falls mysteriously ill. Kara no Kyoukai [The Garden of Sinners Chapter-1] Rating 7.68 ဒီ Anime ကို Animation ကောင်းကောင်းတွေကိုမှဖန်တီးပေးတတ်တဲ့ Ufotable Studio ...
IMDB: 7.0/10 21513 votes